“Andro eran-tany ho an’ny tontolo iainana” : “tsy omentsika valim-babena ny tany”, hoy i Dama | NewsMada
“Andro eran-tany ho an’ny tontolo iainana” : “tsy omentsika valim-babena ny tany”, hoy i Dama
Par Taratra sur 07/06/2018
Tsy nijanona teo amin’ny 5 jona ihany ny fankalazana ny « Andro eran-tany ho an’ny tontolo iainana » fa mbola nitohy tamin’ny fanentanana ny ankizy mpianatra, omaly, tao amin’ny Motel Anosy. Nitondra famelabelaran-kevitra momba ny tany i Dama, tarika Mahaleo ; ary nasongadin’ny ONU ny voka-dratsy ateraky ny loto avy amin’ny plastika.
Nitondra fanazavana tamin’ireo mpianatra ireo amin’ny lafiny maro momba izay fiarovana ny tontolo iainana izay i Dama, ao amin’ny tarika Mahaleo. Natsipin’i Dama amin’ny feon’ny fieritreretan’ny tsirairay, ny mpiara-belona, ny tsy hanadino ny “Bebetany”. Noraketiny amin’ny boky iray « Valimbabena » ho an’ny mpiara-belona izany hafatra izany. “Tsy tambo isaina ny soa omen’io tany io ho antsika olombelona zanany sy ny taranany, amin’ny alalan’ny vokatry ny fambolena isan-karazany, ny rano, ny ala, sns… Ireo rehetra ireo ny fototra maha olona antsika avy amin’ny tany, nefa tsy kolokolointsika, tsy omena valim-babena”, hoy i Dama. “Midika ho reny mampinono ny zanany ny tany. Manome lanja izany reny izany isika Malagasy, fototry ny firenena ka mendrika hajaina”, hoy ihany i Dama.
Nanomboka ny taona 1974 ny namoahan’ny Firenena mikambana ny 5 jona ho “Andro eran-tany ho an’ny tontolo iainana” io. Safidina ny lohahevitra iray hankalazana izany isan-taona, toy ny fiatrehana ny fikorontanan’ny toetr’andro, ny ady atao amin’ny fandripahana ny ala, sns. Amin’ity taona ity, nasian-teny manokana ny loto vokatry ny plastika maneran-tany. Manaitra ny zanak’olombelona rehetra ny Sekretera jeneralin’ny ONU, i António Guterres, ny amin’ny tranga vokatr’izany loto plastika izany, manapotika ny tontolo iainana, ny fahasalaman’ny olona sy ny biby.
100 tapitrisa taonina isan-taona ny fako plastika
Roa tapitrisa taonina isa-minitra ny harona plastika lafo maneran-tany; iray taptrisa taonina isa-minitra ny tavoahangy plastika… 100 tapitrisa taonina isan-taona ny fako plastika maneran-tany, miasa indray mandeha ihany ny ampahany be indrindra sy mivarina any anaty ranomasina manapoizina ny trondro sy ny zavaboahary maro. Sarotra levona anefa ny plastika, maharitra aman-jato taona.
Isika eto Madagasikara, anisan’ny tsy mitandrina izany na nisy aza ny lalàna navoaka ny taona 2015, nandrara ny fampiasana plastika tsy azo ahodina, nefa nijanona ho lalàna fotsiny izany fa tsy hita ny tena fampiharana izany. Raha ny hita eto an-toerana, maro ny tsy fitandremana ataon’ny mponina, tsy misy rahateo koa ny fepetra raisina ho fanavahana ireo karazana fako. Mila politika sy tetibola mazava ny fitantanana ny fako.